Igumbi leebhedi zanamhlanje ezi-2, iimbono ezintle elunxwemeni
Igumbi lokulala eliphucukileyo langoku kumgangatho wesibini wophuhliso olutofotofo lweCribbar enemibono emangalisayo ngaphezulu kweFistral Beach kunye negalufa yaseNewquay.
Bonke ubunewunewu obunokulindela kwiholide yakho kubandakanya ibalcony enetafile yangaphandle kunye nezitulo, ukufudumeza ngaphantsi, umatshini wekofu weNespresso, izithethi zeSonus, i-intshi ezingama-50 ze-Samsung 4k TV, iWiFi.
Igumbi elingaphambili elijonge kumgangatho wesibini kuphuhliso lweCribbar oludumileyo eHeadland Road, Newquay, Cornwall.
Uyilo lolwakhiwo luxhasa ubume obumangalisayo obujonge ibala legalufa kunye neFistral Beach.
Indawo entle ebekwe kakuhle enamagumbi amabini okulala, igumbi elinye lokulala eliphindwe kabini (ene-en-suite) kunye negumbi lesibini lamawele.
Ikhitshi langoku elineenkonzo zegranite.
Ukufudumeza umgangatho kwipropathi yonke.
Inkqubo yokungena engundoqo, kwindawo yokupaka iimoto engaphantsi komhlaba egayiweyo yabucala, enendawo yokupaka ebekelwe bucala.
Inkqubo yefowuni yokungena kwividiyo.
Igumbi lokuphumla elivulekileyo, ikhitshi kunye nendawo yokutyela.
Ifakwe ngeesofa ezimbini, isitulo sengalo esahlukileyo kunye ne-50 intshi ye-Smart 4K ye-flatscreen TV enombono wasimahla.
Umatshini wokuhlamba izitya, umatshini wokuhlamba / isomisi.
Igumbi lokuhlambela losapho elinebhafu (eneshawari ngaphezulu), isitya kunye neWC.
Ivenkile egciniweyo yekheji yokusefa kwisakhiwo apho inokugcina iisuti ezimanzi, iibhodi njlnjl kuquka izibonelelo zeshawa. Iibhodi zomzimba ezilungiselelwe ukusetyenziswa ziindwendwe.
Zonke izinto ezongeziweyo onokuzilindela kwipropathi yobunewunewu ebandakanya umatshini weNespresso, isikhululo se-iPod docking, isithethi seSonus kunye noqhagamshelo olulungileyo lweWiFi.
I-Cribbar sisakhiwo sokuhlala kwaye ngoko ke uqwalaselo ngakubo abahlala kunye kufuneka lujongwe ngamaxesha onke. Ngenxa yoko, indawo yokuhlala inokuvunyelwa kuphela kwiintsapho kunye nezibini kwaye ayifanelekanga amaqela amakhulu anqwenela ukwenza itheko ngexesha lokuhlala kwabo.
I-Fistral Beach, eNewquay, ikumgama weeyadi ezingama-50 kwaye ayiphelelanga nje ekufikeni kunxweme oludumileyo lwehlabathi kodwa inani elincinane leebhari kunye neeresityu eziqhutywa ngokuzimeleyo. Eyona nto siyithandayo yeyona ndlu ibalaseleyo yeentlanzi.
Umphathi wepropathi uyafumaneka kuzo zonke iindwendwe ngexesha lokuhlala kwazo.